Ukutolika ngokubanzi kwamaphupha owamanga ngayo indoda, kwaye wamthanda kakhulu. Ukuchazwa kwengqondo
Uyabona kwiphupha umfana othanda ukuthini?
Intsingiselo yobuthongo, apho wamanga indoda oyithandayo.
Njengoko uyazi, ngamaphupha, ngamnye wethu uphumula, ingakumbi oku kuyinyaniso, ukuba ubona amaphupho amnandi nephunga entliziyweni. Oku kubandakanya iphupha ngothando, kuba xa umntu othanda ukuthandayo, akukho nto iyamnandi. Enyanisweni, loo maphupha ayinokuba yinto enhle kuphela, kodwa iimeko ezimbi. Konke kuxhomekeke kwiziganeko ezihamba kunye, esiza kuthetha ngazo.
Kukho izicelo ezininzi kwi-intanethi. Eyona nto, phupha iincwadi zichaza ukuba xa yonke into ihamba kakuhle ephupheni kwaye uyavuya, musa ukuvuyela kwangaphambili. Inokwenzeka ukuba, ingqondo yakho kuphela edlala umdlalo okhohlakeleyo kwaye ubonisa ngexesha lokuphumla oko ufuna ukukubona. Njengomthetho, amaphupha omntu onomdla kuwe akwenzeki nantoni na ubomi bakho. Ukongezelela, ukuba kwakungabikho nkathazo ephupheni, unokulindela impumelelo, ingakumbi kwintsimi yomsebenzi. Okanye unako ukufumana izakhono ezintsha ezizisa ingeniso enhle kwikamva.
Khangela nje umfana ephusheni ongathandi okwaneleyo
Kubaluleke kakhulu ukujonga ngokunyamekela indlela yakhe ngayo. Zama ukukhumbula ukuba wayevuyile okanye mhlawumbi wayethukuthele. Umzekelo, ukuxabana ephupheni kunye nomfana ongeyimbi kakhulu, kunoko kungumqondiso omhle-kungekudala uza kuba sisondele. Kwenzeka ukuba le ndoda ayizange iphuphe kuphela, kodwa kunye nentombazana ucinga ukuba uyaphikisana. Musa ukukhathazeka, ukuba uyayazi lo mntu ebomini bokwenene, unokuqiniseka ukuba akusiyo into yakhe.
Kwenzeka ukuba ephupheni ungadaniseka kwisithandwa sakho. Ngokuphindaphindiweyo, kuthetha ukuba kungekudala uza kudibana nendoda eselula iya kuba nomdla kuwe.
Ukumanga nomfana othanda ukulala
Ukubamba ngendoda ephupheni kuyamnandi, kodwa kubomi boqobo loo mbono ayithembiseli uvuyo. Ngokuqhelekileyo, iphupha elinjalo li lumkisa ukuba lingalahleli, kuba unokulindela ingxaki phambi kwakho. Musa ukukhathazeka kakhulu, akukho ntlekele, kodwa ukungaqondani okuncane, ukulahlekelwa, iingxabano ezinokuthi zilandelwe kwaye ziya kugqitywa ngemiphumo emihle kakhulu. Enyanisweni, zonke ezi ngxaki zingagwenywa, kwanele ukuba uqaphele, ugweme izihloko ezilukhuni kwaye ungabhubhisi iingxoxo ezingadingekile.
Ukuba uyamanga umfana othanda egumbini elinomngcipheko osondelene naye, qaphela, kuba kungekudala ulwalamano lwakho lunokugxininisa abantu abanobukhwele kunye neengxowa.
Kodwa ephupheni lokumanga nomntu onqwenelayo akusiyo yonke into, kuba kaninzi uhlala unyakaza. Olu bulumko luza kuzisa ixesha elihle kwizinto zobomi bakho boqobo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukugcina le ntombazana ngexesha lomzuzu. Ukuba uvakalelwa kukho into eyoyikisayo kunye neyoyikisayo, ulwalamano lwakho lusenokungabi nantoni. Ngokuqhelekileyo, isimo sakho sengqondo sithetha ngoyiko olufihlakeleyo kunye neminqweno. Mhlawumbi awuyithandi iqabane lakho okanye ufuna ukumbuyisela? Emva koko kufuneka ucinge malunga nokuba udibanise ubomi bakho nomntu.
Njengoko ubona, akukho nhlekelele enkulu kukubanga, ukuvuma okanye ukuthetha nomfana othanda iphupha. Unokuhlala uxolo, qwa lasela indlela oziphatha ngayo, kunye nabo bantu bakubo. Yiba mnandi, umhlobo kwaye akukho maphupha angakwazi ukukugweba.
Yintoni iphupha lokuthutha?
Kutheni ujonge malunga nokuhlamba izitya?
Ukubona umama ofileyo ephupheni
Ziziphi iiveki zeveki zizaliseka amaphupha?
Baba le ngxowa-mali: aba ba toliki baya kuchaza njani oku?
Yintoni inokuphupha imbewu?
Ukuphupha kwengubo ebomvu. Ukuchazwa ngokubanzi kwamaphupha
Umtsalane ovela kwi tshokolethi ngentonga
Isaladi kunye nemifesi ngeeshizi nesonka
Indlela yokwenza intlama yomnyuwa ukulungiselela imodeli
U-Alyona Shishkova uxolise esidlangalaleni kuTimati, ividiyo
IiJaji kunye ne-nectars - iinzuzo zezempilo okanye ingozi
Indlela yokukrazula isifo esingapheliyo sesifo?
Imigaqo yokuchongwa kwamanqaku amanga
Usuku lomama esikolweni-iyure yeyure, imisebenzi eyongezelelweyo yeekharityhulam, imidlalo kunye nemidanso. Imiba yoMhla kaMama kwabafundi besikolo samabanga aphakamileyo kunye nabafundi besikolo esiphakamileyo
Indlela yokubeka imizobo eboyiweyo kwindlu yokuhlala yiFeng Shui
Iingqungquthela ezingenakunqandeka zentsholongwane
I-Palmistry: sinquma ubutyebi bexesha elizayo ngemigca yesandla
Impahla yentloko yeFestile, ubusika 2015-2016, ifoto
UTatiana Navka wachaza indlela alahlekelwe ngayo isisindo
IHoroscope ngo-2010 kaLeo ngenyanga
Inja yeCocktail Inyuse
Amehlo amnandi sisigunyaziso sempilo